အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးဗီ ဒီယိုတွေကို သေချာဝင်မကြည့်ပဲ ခေါင်းစဉ်ပဲ ဖတ်ပြီး ဆဲနေကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ ခင်သဇင် – Shwe Sar
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးဗီ ဒီယိုတွေကို သေချာဝင်မကြည့်ပဲ ခေါင်းစဉ်ပဲ ဖတ်ပြီး ဆဲနေကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ ခင်သဇင်
မင်းသမီးချော ခင်သဇင်ကတော့ စိတ်ထားကောင်းပြီး ဘာမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ဆောင်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်သဇင်ကတော့ သူမစိတ်ထဲရှိတာမှန်သမျှကိုလည်း မချွင်းမချန်ပြော တ တ်သူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပြီး ပြတ်သားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒီကနေ့မှာလည်း ခင်သဇင်က အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေကို သေချာဝ င်မကြည့်ပဲ ခေါင်းစဉ်ပဲဖတ်ပြီး ဆဲနေကြတဲ့သူတွေကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။ဒီခေတ်က ဘေလ်ကုန်မှာ စိုးလို့ interview video ဝင်မကြည့်ပဲ ခေါင်းစဉ်ပဲ ဖတ်ပြီး ဆဲတဲ့ ခေတ်လား ဟင်?ပျော်စရာကြီးနော်..
တွေ့သမျှ ခေါင်းစဉ်လေးတွေဖတ်ပြီး အကုန်ပတ်ဆဲရုံပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ဒီတစ်ခု နဲ့တင် တန်နေပြီ။Covid မှာ ခြွေတာရေးလေးလုပ်ကြမယ်လေ။ ရှင်တို့လည်း ဘေလ်ကုန်မယ်။ ကျွ န်မလည်း လေကုန်တယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပုံဆို လုံလောက်တယ်။ကဲ. တွေ့တွေ့သမျှ ပျော်ပျော်ကြီးပဲ ပတ်ဆဲမယ် တို့ရေ..ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောဆိုလာပါတယ်။
ခင်သဇင်ကတော့ သူမရဲ့မျက်စိရှေ့မှာ မြင်တွေ့နေရသမျှကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါေ စလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
photo- Khin Thazin
မငျးသမီးခြော ခငျသဇငျကတော့ စိတျထားကောငျးပွီး ဘာမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပျဆောငျတတျသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ခငျသဇငျကတော့ သူမစိတျထဲရှိတာမှနျသမြှကိုလညျး မခြှငျးမခနျြပွော တ တျသူတဈေ ယာကျဖွဈပွီး ပွတျသားသူတဈယောကျဖွဈတာကို ပရိသတျကွီးလညျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ခငျသဇငျက အနုပညာရှငျတှရေဲ့ အငျတာဗြူးဗီဒီယိုတှကေို သခြောဝ ငျမကွညျ့ပဲ ခေါငျးစဉျပဲဖတျပွီး ဆဲနကွေတဲ့သူတှကေို အခုလိုပဲပွောလာပါတယျ။ဒီခတျေက ဘလျေကုနျမှာ စိုးလို့ interview video ဝငျမကွညျ့ပဲ ခေါငျးစဉျပဲ ဖတျပွီး ဆဲတဲ့ ခတျေလား ဟငျ?ပြျောစရာကွီးနျော..
တှသေ့မြှ ခေါငျးစဉျလေးတှဖေတျပွီး အကုနျပတျဆဲရုံပဲ။ မွနျမာပွညျမှာ နရေတာ ဒီတဈခု နဲ့တငျ တနျနပွေီ။Covid မှာ ခွှတောရေးလေးလုပျကွမယျလေ။ ရှငျတို့လညျး ဘလျေကုနျ မယျ။ ကြှ နျမလညျး လကေုနျတယျ။ ခေါငျးစဉျနဲ့ပုံဆို လုံလောကျတယျ။ကဲ. တှတှေ့သေ့မြှ ပြျောပြျောကွီးပဲ ပတျဆဲမယျ တို့ရေ..ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောဆို လာပါ တယျ။
ခငျသဇငျကတော့ သူမရဲ့မကျြစိရှမှေ့ာ မွငျတှနေ့ရေသမြှကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတ ဈနေ့ ကို ပိုငျဆို ငျနိုငျကွပါေ စလို့ဆုတော ငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Previous post စွဲမက် စရာကောင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့်မြင်သူ တိုင်း အသည်းယားသွားလောက်စေ မယ့် နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ Video
Next post ကိုဗစ်ကာလ မှာ မင်းသား ကြီး ဝေဠုကျော် ရဲ့ လေးစား စရာ လုပ်ရပ် တစ် ခု